नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नहुंने ? जबकि चीनले हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने.... - Sudur Khabar
नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नहुंने ? जबकि चीनले हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने….
admin January 12, 2018 Special News 0
नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएको २०० वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय वर्षअघि नेपाली शीर तत्कालिन अंग्रेजका सामु झुकेर नेपालको मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो । तर सन् १९४७ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भू–भाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको दशकौं भइसकेको छ । तर यो बहसलाई बलियो ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्न सकेको छैन ।
सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने एकमात्र नारा लिएर अभियानमा लागेका फणिन्द्र नेपाल भन्छन्, ‘चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, भारतले गोआ फिर्ता लिन मिल्ने हामीले किन नमिल्ने ?’ उनले एक पटक सत्तामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई हिम्मतका साथ राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
हामीले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सरकारलाई जोड दिएका छौं । भारतसँग कुरा मिलेन भने जमिन छाडेर जाने बेलायत हो । त्यसैले बेलायतसहित त्रिपक्षीय वार्ता हुनुप¥यो । हामी संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानसक्छौं । त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय सम्मपनि जानुपर्ने हुनसक्छ । तर हामीले भारतसँग मात्रै पनि कुरा राख्न सकेका छैनौं । भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो । भएन भने त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्यो ।’
त्यो दोष तत्कालिन राणा सरकारको हो । त्यसबेला पदम शमसेर र मोहन समशेरले चाहँदा लिन सक्ने अवस्था थियो । सन् १९४९ मा भारत र भूटानकोबीच सुगौली सन्धि भएजस्तै नेपालले पनि सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्रीसन्धिका बेला कुरा उठाउन सक्थ्यो । भारत र भूटानकोबीचको सुगौली सन्धिअनुसार ३२ वर्ग माइल जमिन भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको छ । यद्यपी अझै भूटानको जमिन भारतले ‘लिज’मा लिइरहेको छ । त्यसरी नै नेपालले पनि बेलायतले छोडेर गएपछिको भूभाग फिर्ता माग्नु पर्दथ्यो भारतसँग । यसमा भारतको पनि बदनियत देखिन्छ ।
राणाहरुले जमिनको बारेमा कुरा गर्न तुलसी मेहर भन्ने गान्धीवादी नेतालाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए । तुलसी मेहरलाई गान्धीले तपाईहरु यो जमिन लिनसक्नुहुन्छ लिनुस् भने । तर त्योसँगै उनले भारतको अंग्रेजको धपाउन यहाँका नेपालीहरुले साथ दिए । ती नेपालीहरुलाई नेपालमा गाभी सकेपछि अंग्रेज धपाउने नेपालीले तपाईँहरुलाई धपाउँदैन भन्ने के ज्ञारेन्टी छ रु भन्ने अर्को कुटनीतिक जवाफ दिए । तपाईहरुकै विरुद्धपनि आन्दोलन हुनसक्छ भनेर महात्मा गान्धीले भनिदिए । त्यहि कुरा तुलसी मेहरले राणाहरुलाई सुनाए । जसले गर्दा राणाहरु झस्किए । त्यसपछि राणाहरु जमिन नलिनेमा पुगे । राणाहरु ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भन्नेमा पुगे । यो प्रसङ्ग दस्तावेजकै रुपमा चाहिँ छैन तर इतिहासमा यसको चर्चा चाहिँ गरिन्छ ।
हेर्नुस्, अहिले म ५६ वर्ष पुँगे । मेरो जीवनकालमा नै ग्रेटर नेपाल हुन्छ भनेर म लागेको हुँ । युवाहरुलाई कुनै आश्वासन र सपना बाँड्न खोजेको होइन । किनभने हामीले हारेको भए सन्धि नै हुने थिएन । हामीले हारेर सन्धि गरेको पटक्कै होइन । हाम्रो त जित्ने सम्भावना पनि त प्रवल थियो । पाँच वटा मोर्चामध्ये केवल दुई वटा मोर्चामा मात्रै उनीहरुले छलकपट गरेर जिते । अरु तीनवटा मोर्चामा उनीहरुले कहीँ पनि जितेनन् । जुन पक्षसँग सन्धि गरेको हो, त्यो पक्ष नै रहेन । जुन पक्षसँग सन्धि गरिएको हो त्यो पक्ष मध्ये एउटा पक्ष रहेन भने त्यो सन्धिको अर्थ नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख छ ।
पहिलो कुरा त दलका नेताहरुले हामी इतिहासमा कहिल्यै पनि हामी उपनिवेश भएनौं, हामी स्वतन्त्र रह्यौ भन्नु नै गलत हो । मेची र काली पारीका जमिनहरु व्रिटिस उपनिवेशमा रहेको थियो । त्यसकारण हामी इतिहासमा उपनिवेशमा रहेनौं भनेर हामीले त्यो जमिन नै फिर्ता लिन नखोजेको हो भने त हामी इतिहासमा टिष्टादेखि काँगडासम्म पुग्यौं भन्नु नै भएन । नेपालले अंग्रेजसँग लडाईं नै गरेन, सुगौली सन्धि नै भएन भन्नुप¥यो । त्यो त कसैले भन्न सक्दैन । त्यसकारण सुगौली सन्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुप¥यो । दोस्रो कुरा, सुगौली सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेको हो । बेलायतसँग गरेको सन्धि भारतसँग कसरी लागूहुन्छ ?’
त्यो पक्ष नै नरहेपछि सन्धि समाप्त भयो ।
सन् १९५० को अक्टोबर ३० तारिखमा नेपाल र बेलायतबीचमा एउटा सन्धि भएको छ । सुगौली सन्धि हामीबीचमा लागू नहुने भएको हुँदा अब नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यो सन्धिको पनि धारा ८ मा सुगौली सन्धि रद्द हुनेछ भनिएको छ । बेलायतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने, भारतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने त्यसमा नेपालले पनि सहि गर्ने अनि जमिन चाहिँ जहाँको त्यही रहने भन्ने हुँदैन । बिडम्बना सन्धि भङ्ग भइसक्यो जमिन भारतसँगै छ । त्यसैले जमिन हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि के गर्ने भने विषय ब्यवस्थापिका संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्छ । कुन चाहिँ सांसदले यो जमिन भारतको भइसक्यो अब लिदैनौं भन्दोरहेछ एक पटक हेरौं न त । संसदमा लगेर त्यसको निक्र्योल पनि गर्न नसक्ने, भारतको संविधानको आर्टिकल १, ३ (ग) मा ‘भारतको त्यस्तो भूमिलाई मात्रै भारतको भूमि मानिन्छ जुन भूमिचाहिँ भारतले आर्जन गरेको होस् । एउटा भारतको आफ्नै भूमि, अर्को भारतले आर्जन गरेको भूमि’ भन्ने उल्लेख छ । कि त सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सहि गरेको हुनु प¥यो होइन भने नेपालको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्न किन खुट्टा कपाउँने ? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चीनमा फिर्ता भयो भनेर नेपाली नेताहरुले सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नेपालको दार्जलिङ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? आज भारतसँग माटो छ कागज छैन । त्यसकारण हामीले कागज अनुसारको माटो लिनु प¥यो भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौं ।
वास्तवमा हामीले यो चेतनाका निमित्त यो अभियान सुरु गरेका हौं । हामी घमण्डका साथ के चाहिँ भन्छांै भने विगत १० वर्षयता नेपाली राजनीतिमा ग्रेटर नेपाल एउटा च्याप्टर बन्यो । तर १० वर्ष अगाडि यसकोबारेमा कुरै हुँदैनथ्यो । अहिले सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता लिने की नलिने यो बहसको सुरु भयो । यो प्रयास हामीले नगरेको भए यो बहस नै हुने थिएन । भोलि ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाउने पार्टीलाई जनताले भोट नै नदिने पनि अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण आम मानिसहरुले भोलि सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने दिनपनि आउँछ । यदि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि नलिने हो भने सबै पार्टीले एकसाथ त्यो भूमि भारतकै भयो भनेर भनिदिनु प¥यो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक पटक साहस गर्नु प¥यो । हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटायौं भने ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ । हामीले नुन तेल रोक्ने चिन्ता गर्नु भएन । भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तैमा दिएको पनि होइन । हामीले पारवहन सन्धि गरेका छौं, बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौं । हामी अत्यन्तै डरायौं । भारत आफै गोर्खा रेजिमेन्टबिना टिक्न सक्दैन । नेपालका युवाहरु बेरोजगार भए भनेर उनीहरुले नेपालीलाई रोजगार दिएको होइन । गोर्खा सेना चाहिने भए, नेपालको पानी चाहिने भए सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुप¥यो भन्ने आँट गरौं । खबर डबलीसंगको कुराकानीका आधारमा नेपालले कारण दिदै भन्नुभयो, त्यसकारण नेपालले आफ्नो शक्तिको पहिचान गरिदिए हुनेथियो भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामी कस्तुरी जस्तै भएका छौं । हामीले हाम्रै शक्तिलाई पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।
यो सामाग्री हामीले सुर्यखबर डटकम बाट लिएका हौ !
गोरखालि खबरबाट साभार
देउवाले डडेल्धुराबाट डबल ह्रयाट्रिक हान्नु र कहिल्यै चुनाब नहार्नुका यस्ता छन कारण
हटेन बालश्रम ! संस्थाको लगानी वालुवामा पानी
कक्षा ११ को रिजेल्ट ग्रेडिङ प्रणालीमा भए सँगै कुन ग्रेडलाई उतकृष्ट, कुनलाई सान्तोना ?